गन्थन – १ | BLOGSTREET
गन्थन – १
Posted on November 10, 2009 by Roopess	कात्तिक नसकिएका बेला काठमाण्डु सेलाइसकेको छ । पन्जा र ओभरकोटमा मान्छेहरु मोटाएको देखिन थालिसकेका छन् अचेल । तरुनीका कुरा त कहिले पो गर्न सकिन्छ र ? आम मान्छे भएर सोच्ने हो भने यो पालि पनि राम्रोसँग पानी परेन र काठमाण्डुमा जसले सुकै नाकाबन्दी गरेको घमण्ड गरेपनि जाडो भित्रिसकेको छ ।
पुतलीसडकको यो भित्री गल्ली भएर ठाउँ मान्छेहरु जाम छल्दै हिँड्न खोज्छन् । तर कस्तो दिक्कलाग्दो कुरा भने यहाँ जाम छल्न खोज्नेहरु नै जाम भरइरहेका छन् । कुना पट्टी फुटपाथ चिथोरेर चना केराउ बेच्न बसेको नाङ्लो पसले नीक्कै अल्सी मानेर हाई गर्छ । एक हूल मान्छेहरुले उसलाई हेरेर हिँड्न लागेका बेला उ कुनै घोडा उभिएरै नीदाएजस्तो गरी टाउको खसालेर उँघ्छ । एउटा मसिनो कुकुर चना केराउ सुँघ्छ, पसलेको अनुहार नजिकैबाट हेर्छ र अघि बढ्छ ।
परबाट “सेवई” “सेवई” भन्दै नीलो बुट्टे धोती बेरेको एउटा मधेसी टाउकोमा टोकरी अड्याएर छिटो छिटो हिँड्दैछ । यस्तो लाग्छ कसैले उसलाई लखेट्दैछ र उ भाग्न खोज्दैछ, गुहार गुहार भन्दै । छ तल्ले घरको पाँचौँ तलाबाट एउटी महिलाले त्यसलाई कस्तो अजिवसँग बोलाएकी ! ” ए सेवई!” … ए भाइ वा ए दाइ अथवा यस्तै केहि भनेर बोलाउन सकिन्नथ्यो र ? सेवई लिएर हिँडिरहेको मधेसी मास्तिर हेर्छ । उसको आँखामा के भाव हो कुन्नी । सायद “कस्ती आइमाइ होली ” भन्ने उसको मथिङ्गलमा घुम्यो होला एकचोटि ।
दिक्दारीको चपेटामा परेको मान्छेले यी द्रिश्य नीयालीरहँदा एक जोडी १६-१७ वर्षका केटीहरु भर्खर नुहाएजस्तो कपाल लिएर मल्लिका शेरावतको ठूलो फोटो टाँसिएको एउटा ब्युटी पार्लरभित्र पस्छन् । अगाडिपट्टीको पसल अघिल्तिर मोटरसाइकल रोकेर चुरोट तन्काइरहेको अधबैँसे ती केटीहरुलाई घुरेर हेर्छ । खाउँला जस्तो गरी । अथवा साँच्चै भन्ने हो भनेँ त्यो भन्दा पनि बढि । अनि ती केटीहरु पार्लर पसीसकेपछि एकचोटि बेस्सरी चुरोट तानेर आधी चुरोट फुत्त फाल्छ, सडकमा, चुरोटमाथि केहिको रीस फेरेजस्तो । एकछिन् उसको टाउको वरिपरि धुवाँ जाम हुन्छ ।
ती केटीहरु अब कस्ता बनेर पार्लरबाट नीस्केलान्, यहाँ फेरि मोटरसाइकल र धुवाँहरुको दिक्लाग्दो जाम नहोला भन्न सकिन्न ।
8 responses to “गन्थन – १”	ramesh khatri (@cuterk4u) says:	November 12, 2011 at 10:07 PM	त्यो सहर फेरियेको होला.. महंगा कागज जो संग टन्नै हुन्छ उसकालागी..!! तलब बढ्न पाको हुदैन चौगुना अकासिन्छ बजार एकाएक तातिन्छ सहर .. सपना पुरा भएहोला कसैका , कसैका सपनालाई तेइ कागज रुपी महंगा पन्ना ले बालेर सककायोहोला , घन्टाघर को घडी हेरेर समय बिताउने कोसिस गर्दै होलान कोहि रत्नपार्क को बगैचा भरि थुप्रियेकैहोलन आचेलपनी नेपाली बेरोजगार युवाहरु , दुइ ओटा अधबैसे दाईहरु तेइ राजदरबार हत्याकाण्डको किताब घोक्रो सुकाई सुकाई गाएर बिकाउने कोसिस गर्दै होलान .. .एस्तै हुदै होला सहर तिर …फेरिएर कहाँ आइपुग्यो र खादियेकै छ सहर काठमाडौँ को कोप्चो भित्र , .. !!
Reply	Pingback: गन्थन – ३ | BLOGSTREET
RJANIT says:	December 1, 2009 at 12:55 AM	WOW….ROOPESS….GR8 ganthan yaar….liked it alot…ANTARAAL ko laagi sahi samaagri hunch yo ta…
Reply	Subip says:	November 11, 2009 at 5:13 PM	Sarhai Ramailo. All the best guru. Aru pani yestai yestai lekhharu padhna paaiyoss.
Reply	basantakg says:	November 11, 2009 at 1:28 PM	गज्जबको गन्थन रहेछ! रमाईलो लाग्यो पढ्न!
Reply	आकार says:	November 11, 2009 at 12:31 AM	* मङसिर नै लेख्या हो, वा कात्तिक लेख्न खोज्या हो ???
Reply	roopess says:	November 11, 2009 at 12:43 PM	सच्याइएको छ ।
Reply	आकार says:	November 11, 2009 at 12:27 AM	हाँसो को फोहोरा छुट्यो है मेरो “जसले सुकै नाकाबन्दी गरेको घमण्ड गरेपनि जाडो भित्रिसकेको छ ।”
जेहोस् गन्थन चाँहि रमाइलो छ है, क्रमश भनेर टुंगिएछ आज को पोष्ट त, यस्ता रमाइला गन्थन पढ्नु को मज्जा नै बेग्लै हुन्छ ।
हुन त यही कुरा मैले नि भोगिरहेको हुन्छु तर प्रस्तुती फरक भइदिन्छ अनि रमाइलो हुन्छ ।
वास्तविक यथार्थ मा गरिएको गन्थन मलाई चाँहि साह्रै मन पर्‍यो है ।🙂